သူတော်စင် အကြီးအကဲများ၏ ဂူဗိမာန်အားလေးစားအရိုအသေပေးခြင်း ကိစ္စ နှင့်ပတ် သက်ပြီး ရှီအာ အေမာမ် မီယာ အိုလမာ၏ အမြင်ကို ကိုဖော်ပြပေးပါအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
News Code : 809482
မည်သို့ဆိုစေဝဟာဘီများသည်ကျွန်ုပ်တို့(ရှီအာအစ္စနာအရှာရီ)အားအဘယ် ကြောင့်သာသနာ့အကြီးအကဲများ၏ဂူဗိမာန်သို့သွားပြီးဇေယာရတ်(သ)လုပ်ရပါ သနည်း?ဟုစောဒကတက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့
ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်များသည်အမြဲတမ်းမိမိတို့၏အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပြီး၊ထားနေဆဲဖြစ်သည်။၎င်းတို့အတွက် ဇေယာရတ်(သ)လာလုပ်လေ့ရှိပြီး၊လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အုပ်စုငယ်လေးတစ်စုတည်းသာ(ဝဟာဘီ)အုပ်စုသာလက်မခံဘဲဆန့်ကျင် နေကြသည်။ပြီးနောက်တကမ္ဘာလုံးရှိမွတ်စလင်များအားလုံးအထဲ၌၎င်းတို့ သာမွတ်စလင်စစ်မှန်ကြောင်းပြောဆိုကြပါသည်။
ဘီနာမည်ကျော်ဓမ္မသတ်ပညာရှင်(بن باز )
ဗင်ဗါးစ်အနေဖြင့်(جريده «الجزيره) ဂျာရီဒေအေအလ်ဂျဇီးရေပြောကြားသည်မှာ-
الفقه عل المذاهب الاربعهကျမ်း၏တင်ပြချက်အရ
ကွယ်လွန်သွားသူများ၏ကဗဲရ်ကိုလေးစားရိုသေခြင်း၊အထူးသဖြင့်အကြီးအကဲများ၏ကဗဲရ်များကိုလေးစားရိုသေခြင်းသည်နောက်ခံသမိုင်းအဟောင်းအရှည်ကြီး ရှိပေသည်။နှစ်ပေါင်းထောင်များစွာအလျှင်ကမ္ဘာလူထုအနေဖြင့်မိမိတို့၏ ကွယ်လွန်သွားကြကုန်သူများ၏ကဗဲရ်များကိုအရိုအသေ၊အလေးအမြတ်၊ ပေးကြပေသည်။
အကြောင်းသည်ကား-လူထုအနေဖြင့်မိမိတို့ဆွေမျိုးများ၏ကဗဲရ်များဘေး၌စိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုကိုအမြောက်အများခံစားကြပေသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်၎င်း၏ကွယ်လွန်သူများနှင့်အတူမိမိတို့အတူရှိနေခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ဇေယာရတ်(သ)များသည်၎င်းတို့၏စိတ်မချမ်းမြေ့စရာများ၊စိတ်ညစ်စရာများကိုကုသပေးရာရောက်လေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်သတင်းမရတော့ဘဲလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားသူများအတွက်ကိုပင်ကဗဲရ်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးဘေးနား၌နေပြီးပျောက်ဆုံးသွားသူများကိုတမ်းတ၊သတိရကြလေ၏။
ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းသောအချက်သည်ကား-အသိပညာမဲ့စလ်ဖီး (ဝဟာဘီများ)အနေဖြင့်အခြေအမြစ်မရှိ၊မခိုင်လုံသောသက်သေအထောက် အထားများဖြင့်ပြန်လည်အစားထိုးမရအောင်အစ္စလာမ်မီယဉ်ကျေးမှု၊အမွေအနှစ်များကိုဖျက်ဆီး၊ဖြိုဖျက်ခဲ့ကြပေသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့်ဇေယာရတ်(သ)၌သာဖတ်ရွတ်သောစာသားများကို လေ့လာ သိရှိသွားမည်ဆိုလျှင်လုံးဝ၊ဥဿုံဤကဲ့သို့သောရှက်ဖို့ကောင်းသော စကားကိုပြောမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါသည်။
ပေါင်း(၁၀၀)( الله اكبر )ဟုရွတ်ဆိုရပေမည်။
عَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِأشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ
جِوَارِهِحَتَّى دَعَاكَ اللهُ إِلَى
بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسِلِّمُونَ وَ بِاَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إلَىاللهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَإلَى
အသင်တို့(အေမာမ်များ(အ.စ)သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဘက်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါ သည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်ပက်သက်၍သက်သေအထောက်အထားပြသည်။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အပေါ်အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်၏။
مُسْتَشْفِعٌ إلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُمْ
သေချာလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌ အလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)အနေဖြင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော် ဝယ် ဂိုနာဂါများအပြစ်ငရဲသမားများအတွက်ရှဖါအတ်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ၊ပါရှိပေသည်။
إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىقَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُم
لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِيماً
ထိုသူများသည်မိမိတို့အပေးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု(ဂိုနာ)ပြုလုပ်မိတိုင်းတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံလာရောက်ပြီးသောင်ဗာပြုကြလေ၏။တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)သည်၎င်းတို့အတွက်(استغفار)အက်စ်သက်ဂ်ဖါပြုလုပ်ပေးလေ၏။ထိုသူများသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အားသောင်ဗာလက်ခံသည့် အရှင်၊သနားကြင်နာ၊ညှာတာတော်မူသောအရှင်အဖြစ်သိထားပေသည်။
၃။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အနေဖြင့်မိုနာဖေက်များအားကန့်ကွက်ရှုတ်ချရင်း မိန့်ကြား သည်မှာ-
لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ مُّسْتَكْبِرُونَوَهُمْ
၄။အယုတ်ညံ့ဆုံးနောက်လိုက်လူမျိုးသည်ဟဇရတ်(သ)လူးသ်၏နောက်လိုက်လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပေသည်။ရှိုက်ခ်အန်ဘီယာ(တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)၏အကြီးအကဲ)ဟဇရတ်(သ)အီဗရာဟီးမ်(အ.စ) ကိုယ်တော်တိုင်၎င်းတို့အတွက်ရှဖါအတ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ (အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံ၎င်းတို့အခွင့်အရေး၊ခွင့်ပိုပေးဖို့တောင်းခံခဲ့လေသည်။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။၎င်းတို့အနေဖြင့်သောင်ဗာပြုလုပ်ကြလေမည်။)
သို့သော်၎င်းတို့အနေဖြင့်မိမိတို့၏ဂိုနာများကြောင့်သောင်ဗာပြုလုပ်ဖို့ပင်စွမ်းအား မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ရှဖါအတ်မပြုပေးရန်ဟဇရတ် (သ)အီဗရာဟီးမ်(အ.စ)အားမိန့်ကြားခဲ့လေသည်။
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ * إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِلُوطفَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ
هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْلَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ
مَرْدُودآتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ
တမန်တော်မြတ်ကြီးအီဗရာဟီးမ်(အ.စ)၏စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်(မရင်းနှီးသော၊မသိဖူးသောကောင်းကင်တမန်များကိုမြင်တော်မူချိန်)ပျောက်ကွယ်ပြီးနောက်၊သတင်းကောင်း(သားတော်ဖွားမြင်သည့်သတင်း)၎င်းထံရောက်ရှိပြီး၊ဟဇရတ်(သ)လူးသ်(အ.စ)၏နောက်လိုက်၊နောက်သားများနှင့်ပက်သက်၍စကားဆိုလေ၏။(ရှဖါအတ်ပြုလေ၏။)အကြောင်းသည်ကား - ဟဇရတ်(သ)အီဗရာဟီးမ်(အ.စ)သည်ထောက်ထားစာနာတတ်သူ၊သောင်ဗာပြုသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌإِنَّ
(عالم برزخ )ဘဝ၌ရှင်သန်နေပါသလော?
၂။ဒုတိယမေးခွန်းအရဆိုပါက-အဘယ်ကြောင့်မွတ်စလင်များအားလုံးအနေဖြင့်နမာဇ်၏သရ်ှဟွဒ်၌(... عليك أيّها النّبىالسّلام)ဟုဆိုပြီးစလာမ်ပို့သရပါသနည်း?
 … آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّيَا أَيُّهَا الَّذِينَအာယတ်တော်အားဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်၍တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဂူဗိမာန်အနီး မချိတ်ထားပါသလော?
وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبِهُوا
 وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىمَنْ زَارَ قَبْرِى
 زَارَنِى بَعْدَ مَوْتِى فَكَأَنَّمَا زَارَنِى فِى حَيَاتِىمَنْ
အဓိပ္ပါယ်။ ။အကြင်မည်သူမဆိုအကျွန်ုပ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)အားအကျွန်ုပ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဇေယာရတ်(သ)ပြုမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေစဉ်၌ ဇေယာရတ်(သ)ပြုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပေသည်။
ဆက်လက်၍အထက်ပါဟဒီးစ်တော်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာထုတ်နိုင်သောရလဒ်သည်ကား(شدّ رحال )
ယုတ်စွအဆုံးအီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ၎င်းတို့၏လူထုအကြား၌အကြင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်ကဗဲရ်ခေါင်းရင်း၌ရပ်ပါက မရစ်သ်(လူသေ) အနေဖြင့်အမျိုးသမီးအားကိုယ်တုံးလုံးတွေ့ရသည်ဟူသောယုတ္တိမဆန်သော ယုံကြည်မှုများကျော်ကြား၊နေပါသည်။
لَعَنَ الله زَائِرَاتِ القُبُورِ
အချို့စာအုပ်များ၌(زائرات)၏နေရာ၌(زوّارات القبور)ဇေယာရတ်(သ) အလွန် အကျွံလုပ်သောအမျိုးသမီးများဟုသောစာလုံးသုံးထားပေသည်။
အချို့အဟ်လေစွန္နတ်ပညာရှင်များအနေဖြင့်သာဓကအားဖြင့်သေရ်မီးဇီးအနေဖြင့်ပြောကြားသည်မှာ- တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်အမျိုးသမီးများအား ကဗဲရ်များသို့မသွားရောက်ဖို့တားမြစ်ခဲ့သည်မှာကာလအတွက်သာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း၌ဤအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်တော်မူခဲ့ပေသည်။
အတွက်တာဝန်မကျေသောအမျိုးသမီးများကိုဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤအတွက်ကြောင့်(صيغه مبالغه)ဆီဂေး
ဤသို့ဖြင့်(၇)ရာစုအဗ်နေသိုင်းမီးယား(ဝဟာဘီတို့အတွေးအခေါ်ပိုင်ရှင်)ခေတ်ဖြစ်ပြီး၊၎င်းတို့အနေဖြင့်မိမိနောက်လိုက်များကိုဇေယာရတ်(သ) အတွက် နီယတ်(သ)ပြုပြီးမက်စ်ဂျစ်ဒ်သုံးခုမှအပအခြား၊ကျန်နေရာများသို့သွားခွင့်မပြု ခဲ့ပေ။မိမိတားမြစ်ချက်ကိုဟဇရတ်(သ)အဘူဟိုရိုင်ယာမှတင်ပြသောဟဒီးစ်တော်ကိုသက်သေအဖြစ်သုံးလေသည်။
إلى ثلاثة مساجد; مسجدى هذا و مسجد الحرام و مسجد الأقصىلا تشدّ الرحال إلاّ
ပထမအချက်။ ။အမှန်တကယ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လျှင်ဤဟဒီးစ်တော်၏အကြောင်းအရာသည်မက်စ်ဂျစ်ဒ်များအတွက်ဖြစ်ပြီးဇေယာရတ်(သ)အတွက် နေရာ ကိုမပြဆိုထားချေ။
 تشدّ الرّحال إلى ثلاث مساجد
إثبات شىء نفى ما عدا
 مساجد; مسافرت فقط براى سه مسجد جايز استإنّما يسافر إلى ثلاثة
ပထမအချက်အနေဖြင့်အွန်မသ်(နောက်လိုက်၊နောက်သားများ)၏အဂ်ျမာ(اجماع)(စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်)အရသာသနာ့ခရီးဖြစ်စေ၊ရိုးရိုးခရီးဖြစ်စေ၊ခရီးထွက်ခွင့်ရှိ ပေသည်။မက်စ်ဂျစ်ဒ်သုံးခုအတွက်သာလျှင်ခရီးထွက်ရမည်ဟူ၍ သတ်မှတ်ချက်မရှိပေ။
ဤအတွက်ကြောင့်ရလဒ်ထွက်လာသည်ကား-ဤနေရာ၌ပညာရပ်ဝေါဟာရ၊အရ(حصر اضافى)ကိုသုံးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ-မက်စ်ဂျစ်ဒ်များအနက်ဤမက်စ်ဂျစ်ဒ်သုံးခုအတွက်(شدّ رحال)(နီယတ် (သ) ဖြင့်ခရီးထွက်ခြင်း)ပြုနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ပထမတင်ပြထားသည့်ဟဒီးစ်တော်၌ဖေါ်ပြထားသည့် စာသားလော!(သို့)ဒုတိယတင်ပြထားသည့်ဟဒီးစ်တော်၌ ဖေါ်ပြထားသည့်စာသားလော!(သို့)တတိယလော! တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ဆိုလိုချက်တစ်ခုတည်းကိုသုံးမျိုးစာသားဖြင့်မိန့်ခဲ့ဖို့ဆိုသည်မှာအရမ်းကိုမဖြစ်နိုင်ချေ။ဟဒီးစ်တင်ပြသူ(ရဝီး)များအနေဖြင့်ရီဝါယတ်တော် များ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသာတင်ပြထားသည်မှာထင်ရှားနေပေသည်။
မွတ်စလင်များအနေဖြင့်ရာစုများစွာကပင်မိမိတို့၏သာသနာ့အကြီးအကဲများ၏ ကဗဲရ်များကိုသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများ၊သာမန်အဆောက်အဦး များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇေယာရတ်(သ)ပြုဖို့သွားခဲ့ကြပေသည်။ဘရ်ကသ် (ကောင်းသောလာဘ်)ယူလေ့ရှိသည်။မည်သူမျှပြဿနာမရှာခဲ့ပေ။
သမိုင်းဆရာမစ်အူးဒီ(ဟီဂျီ၎ရာစုကွယ်လွန်)မိမိ၏သမိုင်းဝင်စာအုပ် (مروج الذهب)လည်းကောင်း၊ ထို့အတူ(၇)ရာစုနှင့်(၈)ရာစု၏ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်အဗ်နေဂျဘီးရ်နှင့်အဗ်နေဗသူသေတို့အနေဖြင့် မိမိတို့ခရီးသွားမှတ်တမ်းများ၌အထက်ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကြီးကျယ်ခန့်ငြားပြီး၊ မင်္ဂလာနှင့်သိက္ခာအပြည့်ရှိသော ကဗဲရ်၊ ဂူဗိမာန်တော်များကို ဖေါ်ပြရေးသားထား ပါသည်။
သို့သော်ဆော်ဒီ(ဟေဂျာဇ်)၌သတင်းမရှိပေ။အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း? အဖြေရလဒ်သည်ကားဝဟာဘီများအနေဖြင့်အစ္စလာမ်သာသနာ၏စစ်မှန်သော၊ မှန်ကန်သောဆိုလိုချက်အဓိပ္ပါယ်ကိုသဘောမပေါက်ကြသေးသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အတွင်းဝဟီမြေ(ဆော်ဒီ)၌ဝဟာဘီများ အာဏာရရှိပြီး မွတ်စလင်တို့အားထာဝရရှုစားခွင့်မရရန်အတွက်သမိုင်းဝင်အစ္စလာမ်လက်ရာ အမွေအနှစ်များကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ခါးသီးရင့်သီးသည့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်၈၀အလျင်(၁၃၄၄ဟီဂျရီ)ဝဟာဘီများအနေဖြင့်ဆော်ဒီ၌အာဏာရရှိလာချိန်တွင်မစဉ်းစား၊မဆင်ခြင်ဘဲ၊သမိုင်းဝင်အစ္စလာမ်လက်ရာ အမွေအနှစ်များအားလုံးကိုရှေးရ်က်(သို့)ဗေဒအတ်ဟုဗဟာနာပြုကာဖျက်ဆီးပြီး လွင်ထီးခေါင်ပြင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
مَسَاجِدَلَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည်မိမိတို့၏တမန်တော်မြတ်များ (အ.စ)ရဲ့ကဗဲရ်များကိုမက်စ်ဂျစ်ဒ်အဖြစ်ပြုလုပ်ကြသောရဟူဒီလူမျိုးအပေါ် လာနသ်ချပေးတော်မူပါ။
ဤလုပ်ရပ်သည်ကဗဲရ်များအားခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ဟရမ်ဖြစ်ပါသလား?(သို့) တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ကဗဲရ်မိုသွာဟရ်ဖြစ်၍သီးသန့်၊သီးခြားဖြစ်သွားရပါသလား?ရှေးရ်က်နှင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပခဝပ်ကိုးကွယ်မှု၌သီးသန့်၊သီးခြားကိုလက်ခံထားပါသလား?
( الله(صلى الله عليه وآلهقال لى على بن ابى طالب ألا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول
سويتهأن لا تدع تمثالا إلاّ طمسته و لا قبراً مشرفاً إلاّ
အသင်အတွက်တာဝန်တစ်ခုပေးရမည်လော?၎င်းတာဝန်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)သည်ကျွန်ုပ်(အလီ(အ.စ))အားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (တာဝန်သည်ကား)အသက်ရှိရုပ်ပုံ(ပန်းချီ)တွေ့လျှင်ဖျက်ပါ။ကဗဲရ်မြေပုံအမြင့်ကိုတွေ့လျှင် မြေနှင့်ညီအောင်လုပ်ပါ။
(ابن ابى ثابت)နှစ်ဦးသည်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်သူများဖြစ်ပေသည်။
၎င်းထက်ပိုမိုထင်ရှားသောသာဓက၊ကိုပေးရမည်ဆိုလျှင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်ဖြစ်ပါသည်။(اصحاب كهف )၏့လျှိုဝှက်ချက်ပေါက်သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၊လူထုတို့အနေဖြင့်၎င်း(اصحاب كهف )တို့၏ကဗဲရ်ပေါ်၌မက်စ်ဂျစ်ဒ်ကိုဆောက်လုပ်မည်ဟုဆိုခဲ့လေ၏။
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداًقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى
( جريده الجزيره، شماره 6826 (22 ذى القعدة 1411)
الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 1، صفحه 590
 سوره منافقون، آيه 5
 سوره هود، آيات 74 تا 76
 عوالى اللئالى، جلد 4، صفحه 73
 ( 278 دارقطنى ، كتاب «سنن» (جلد 2، صفحه
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်သည်ကား-အလ္လာမာအမီးနီး(ရှီအာအာလင်မ်)အနေဖြင့်မိမိ ၏ကျမ်း((အလ်ဂဒီးရ်))အတွဲ၅၊စာမျက်နှာ၉၃၊တွင်ကျော်ကြားသောစွန်နီကျမ်း၄၁ကျမ်းမှ အထက်ပါဟဒီးစ်တော်အားတင်ပြထားပါသည်။
အလ္လာမာအမီးနီး(ရှီအာအာလင်မ်)အနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်း((အလ်ဂဒီးရ်))အတွင်းစွန်နီကျမ်း ၁၃ ကျမ်းမှအထက်ပါဟဒီးစ်တော်အားတင်ပြထားပါသည်။
 زيارة القبورسنن ترمذى، جلد 3، صفحه 371 (نامبرده عنوان باب را «باب ما جاء من الرخصة فى » قرار داده است
 صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 126
 (صحيح بخارى، جلد 1، صفحه 110 )
( والنصارى )ဆိုသောစကားစုထိုးပြီး(صحيح مسلم)အတွဲ(၂)စာမျက်နှာ၆၇၌လည်းပါရှိပေသည်။
 (صحيح مسلم، جلد 3، صفحه 61 )ဤဟဒီးစ်တော်သည်စွန်နီရီဝါယတ်တော်များ၌အကြိမ် ပေါင်းများစွာပါရှိပေသည်။
 سوره كهف، آيه 21
 ဤအဖြစ်အပျက်သည်အမှန်တကယ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်အစစ် ဖြစ်ပေသည်။လေ့လာနိုင်သောအကိုးအကားမှာ-صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 1943، و كنزالعمّال، جلد 16، صفحه 249
 مستدرك الصحيحين، جلد 4، صفحه 560
 تاريخ ابن عساكر، جلد 7، صفحه 137